osụk site positron on Tọs, 06 / 29 / 2017 - 23: 23
driveshaft agaghị ekere
M gbanwere impeller on a 3 HP 1952-54 (JW-1) Johnson. Ka m were ya iche, na ala unit dara n'ala. Ugbu a, driveshaft anaghị-esonye propela. Ọ na-kewapụrụ n'ụzọ niile. Ọ bụ n'ebe a isi ma ọ bụ na ụfọdụ ndị ọzọ anwansi na-eme ka ndị propela n'aka?
osụk site boatman350 na òtù ezinụlọ, 01 / 23 / 2019 - 10: 29
Na zaghachi driveshaft agaghị ekere by positron
mgbe ahụ, ana m ewepụ obere ala ahụ ma weghachite ya na ọkpụkpụ ahụ yiri ka ọ bụ n'ụzọ niile mana ọhụghị m na ọ bụrụ na ị jide obere ala ahụ, ọ ga-adị n'akụkụ ụlọ ma ị na-eleba anya n'olulu ahụ. mepee maka ogwe ma ọ bụrụ na i jide ya otú ahụ na-eche ihu na mgbidi, obere igodo dị ka ihe ga-esi n'ime ya pụta
osụk site boatman350 on Tọs, 06 / 06 / 2019 - 07: 26
mgbe m weere obere ala m ...
mgbe m na-ewepụ ala m dị na mpempe ụgbọala agaghị abanye na mpaghara ahụ maka m achọpụtara na enwere m ụdị "igodo" m mechara nwee ike ijide akụkụ nke ala dị n'akụkụ nke na-eche ihu n'elu ụlọ
osụk site ttravis on Tọs, 06 / 29 / 2017 - 23: 42
Nke a bụ eserese. https: / ...
Nke a bụ eserese. http://www.marineengine.com/parts/johnson-evinrude-parts.php?year=1957&…
- Mmelite - M debere njikọ ahụ.
osụk site positron on Fraị, 06 / 30 / 2017 - 22: 54
Na zaghachi Nke a bụ eserese. https: / ... by ttravis
Link ka esereese bụ ihe nwụrụ anwụ. Ọ bụghị ...
Link ka esereese bụ ihe nwụrụ anwụ. Bụghị n'aka na ihe "youtu.be" na-ma ọ bụghị YouTube!
osụk site ttravis on Nọdụ, 07 / 01 / 2017 - 07: 04
Na zaghachi Link ka esereese bụ ihe nwụrụ anwụ. Ọ bụghị ... by positron
My ọjọọ .... Gbalịa nke a: http: ...
My ọjọọ .... Gbalịa mee nke a: http://www.marineengine.com/parts/johnson-evinrude-parts.php?year=1957&…
osụk site jakeboat na Solomon, 07 / 10 / 2017 - 23: 17
Nke a bụ akụkọ m nwere, m na-arịọkwa mgbaghara n'ọdịnihu ma ọ bụrụ na nke a abụghị ebe ziri ezi maọbụ usoro maka ajụjụ m ma enwere m ọhụụ dị ka nke a. Enwere m nwa nwoke na-ahụ n'anya ịkụ azụ na anyị ejiri azụ mmiri na-azụ azụ na afọ ole na ole ma ọ na-eme nke ọma na ọ chọrọ ịga n'ọdọ mmiri. Ozi ọma anyị na-ebi na Minnesota dị ọtụtụ ọdọ mmiri, akụkọ ọjọọ bụ na ọ dịtụbeghị m ụgbọ mmiri. Anyị nwetara 14'boat / ụgbọala na-adọkpụ site n'aka mmadụ na evinrude 3hp lightwin motor. Ezi mmalite ha kwuru na ọ na-aga nke ọma. Anyị wepụtara ya ugboro abụọ ma ọ dị mma. Site na ok, ekwuru m na ọ ga-adị ngwa ngwa, ma echere m na ọ bụ 3hp, aghaghị m ịme 3 / 4 ahụ ka ọ gbaa ọsọ. Mgbe ahụ, ọ malitere ịnwụ ozugbo. Achọpụtara m ugboro ole na ole ọ gbanwere ihe dịka 3 sekọnd, ikekwe ebe ọ kwesịrị. Ma ọ fọrọ nke nta ka anyị daba n'ime ọdọ mmiri ahụ ma chọọ m ka anyị debe ya ọnụ ma ana m adị ọhụrụ na motọ 2. Ruo ugbu a, m gbanwere plọg ma wepụ gas kpamkpam iji malite ọhụrụ. Tinye ya na ya na-agbakwa ọsọ dịka tupu. A ga - enwe ekele maka nduzi / nduzi ọ bụla. Site na ịgụta saịtị a yiri ụda carb bụ mmalite dị mma. Aro ọ bụla?
Mkpụrụ ụgbọala bụ Evinrude 3hp lightwin model 3602e.
M ga-enwe mmasị inye aka kụziere nwa m nwoke banyere ụgbọ ala ụgbọ mmiri na nke a yiri ka ọ bụ ọrụ mmemme dị mma.
osụk site ttravis na Solomon, 07 / 10 / 2017 - 23: 35
Na zaghachi mkpa aka by jakeboat
Were a anya na ...
Lelee anya ọkụ ahụ. Ihe niile m na-ekwu bu ihe niile 3 HP motors nke ochie chọrọ mgbanaka ọhụrụ, ma nwee ike gbanwee isi ihe na condencer mgbe ị nọ na ya. I nweghị ike ịmara ma akụkụ ndị ahụ adịghị njọ site n'ịhụ ha.
Lelee m 3 na 5.5 HP mgbanye-akụ na-elu-peeji nke.
M ga-eme a full-akụ na-elu-dị ka m mere tupu m atụgharị nwa m rụrụ na ya.
osụk site jakeboat na Solomon, 07 / 10 / 2017 - 23: 42
Na zaghachi Were a anya na ... by ttravis
Ebee ka m chọta gị akụ up ...
Ebee ka m ga-ahụ ụda gị?
osụk site Ram Jet Na Sun, 02 / 11 / 2018 - 23: 20
Nanị m zụtara Johnson 3 HP ma na-edozi ya. Enwere m ezigbo ahụmịhe mpempe akwụkwọ na mpempe akwụkwọ 2. Edere post gị na July gara aga ma abụrụ m otu. Ọ bụrụ na m nwere ike ịnyere enyemaka, mee ka m mara. My Johnson 3 dị iche ugbu a na-echere akụkụ ndị ọzọ. Ọ bụ n'ezie ígwè ọrụ na-atọ ụtọ ma dị mfe ịrụ ọrụ na - e mere ya ka ọ bụrụ. Ọ bụrụ na ị maghị na Johnson na Evinrude bụ otu ígwè ọrụ ahụ.
osụk site jakeboat on Tus, 08 / 01 / 2017 - 20: 41
M wee akụkụ ahụ niile for ...
N'ihi ya, m nwetara akụkụ niile maka nkwụsị usoro sitere na amazon ekele maka saịtị a. Ọ dị mfe. M gbasoro mgbidi ahụ ruo n'ókè nke oge na-eji mita ohm ọ bụla na nke ahụ bụ ebe m furu efu. Amaghị m ihe ọ bụla gbasara eletriki ka okwu ahụ dị ka oghe mepere emepe na-enweghị ngwụcha.
Kedu ngwá ọrụ m kwesịrị iji nwalee ya? Ebee ka m ga-ejikọ ma na-eduga? Onye na-enyocha nwa okorobịa ahụ na ụlọ ahịa akpaaka na-ere m naanị enwere otu clip ka m wee chee na ọ bụ mita na-ezighi ezi? Kedu ka m ga-esi agwa nke bụ nọmba otu ma ọ bụ abụọ?
osụk site ttravis on Tus, 08 / 01 / 2017 - 23: 23
Na zaghachi M wee akụkụ ahụ niile for ... by jakeboat
Weregodị a mfe circuit ...
Hụ ebe nlegharị anya dị mfe ebe ị nwere batrị na bọlbụ. Mgbe ị nwere waya site na batrị gaa na bọlbụ ahụ, wee si na bọlbụ ahụ laghachi na batrị ahụ, ị ​​nwere mpaghara mechiri emechi. Eletrik na-aga n'okporo ụzọ a na-adịghị ahụkebe mgbe ọ na-apụ n'otu akụkụ nke batrị ahụ na n'akụkụ nke ọzọ. Ọ bụrụ na ị ga-ekpochapụ otu n'ime wires, ị ga-emepe sekit ahụ, dịka otu mgba ọkụ ọkụ nkịtị na-emepe ma mechie sekit na bọlbụ ọkụ ahụ. Mmiri mmiri na-arụ ọrụ yiri nke ahụ .... ị meghere ma ọ bụ mechie ha.
Ihe ị na-anwale maka bụ iji jide n'aka na-emebi ihe nso kpọmkwem oge na OGE akara na flywheel na-n'ụzọ ziri ezi kwekọọ oge akara na stator isi.
Ọ bụrụ na ị na-ewe mita ohm gị ma metụgharịa nyocha abụọ ahụ, mita ohm gị ga-egosi 0 ma ọ bụ mechie circuit. Ọ bụrụ na nyocha ahụ adịghị emetụ ibe gị aka, ịgụ ya ga-abụ njedebe ma ọ bụ na-emeghe oghere. Ụfọdụ mita mita na-enwe ọnọdụ ebe mita ga-agagharị mgbe ahụ a na-emechi sekit ahụ. A na-akpọ nke a ihe nyocha na-aga n'ihu.
Enwere ike iji mita ohm mee ihe iji nwalee ma otu oghere emeghe ma ọ bụ mechie. Ka anyị kwuo na anyị chọrọ ịnwale otu bọlbụ ezinụlọ. Ọ bụrụ na ị na-ebute otu mita ohm na isi nke oriọna, na nke ọzọ na njikọta etiti, mita ohm ga-elele ma ọ bụrụ na ọkụ eletrik nwere ike ịgbapụ na filament. Ọ bụrụ na agbajila filament, oghere ahụ na-emeghe ka egosiri na njedebe na-enweghị ngwụcha (ọkụ eletrik adịghị asọba na ikuku na volta voltage) ya mere agbagharị ahụ mepere emepe, a na-erekwa oriọna. Ọ bụrụ na ị nweta ịgụ na mita ohm bụ 0 ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 0, mgbe ahụ, ọkụ eletrik na-agafe na filament na oriọna kwesịrị ịdị mma. Ohmmeter anaghị ezipụ ọkụ eletrik iji mee ka bọlbụ ahụ dị elu, kama ọ ga-eleba anya n'ihu, ma ọ bụ ime ka circuit ahụ mepee ma ọ bụ mechie.
Ebe a bụ a youtube video na isiokwu.
Were a nso lee anya na m 5.5 HP mgbanye Page ebe m na-arụ ọrụ ka mma iji kọwaa otu esi anwale oge. Ọ bụ moto dị iche, ma usoro mgbanyụ ahụ bụ otu ihe ahụ. Ana m agba ndị mmadụ ume ịgụ ma 3.5 na 5.5 HP.
Nlere gị na-eduga na ohm gị agaghị adaba n'okpuru windo iji nwalee oge ahụ ka ị ga-ejikọta eriri waya dị mkpirikpi na ebe ị na-agba. Ule nyocha na ihe ntinye akwukwo ndi ozo di oke ala. Ị nwere ike nweta ha site na ụlọ ahịa ngwaike mpaghara, ma ọ bụ Amazon. Mpeepe otu njedebe nke ule nlele ahụ na njide nkedo n'elu ebe nkwụsịtụ, ebe ị ga-ejikọta wiil na wired condenser dika egosiri na 5.5. Na-enweta nkwụsị nke ọzọ nke ule nlele site na onu n'ime isi stator.
Ugbu a, ị nwere ike ịnwale ma isi gị na-emeghe ma ọ bụ mechie site na ijikọta otu ụzọ nke ohm mita gị na nyocha ụzọ, na nke ọzọ na ala. Site n'ala, ekwuru m na ọ bụla ígwè ma ọ bụ ihe nkedo n'elu moto. Ụgbọala n'onwe ya bụ ụzọ nyocha ọzọ.
Ugbu a, ị dị njikere ịgbanwuo ọkpụkpọ ahụ ma hụ ma ọ bụrụ na sekit ekpuchi mgbe ejiri aka ya rụọ ọrụ dị ka egosiri na usoro ahụ.
Ị ga mkpa ikwugharị a usoro ịgbanwe oge na ndị ọzọ na-emebi ihe maka ndị ọzọ cylinder.
Echere m na nke a na-enyere aka. Tom
osụk site jakeboat on Tọs, 08 / 03 / 2017 - 22: 21
Na zaghachi Weregodị a mfe circuit ... by ttravis
Chaị, nke bụ ibu bara uru. ...
Lee, nke ahụ bara uru. M gbasoro ntụziaka ndị ahụ ma nwee ike mezue usoro mkpuchi ahụ. M tinyere ya n'ime ịwụ ma gbaa ọsọ. Ọ na-akawanye mma kama ọ ga-eme ka ọ ghara ịdị elu ma na-acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ n'agbanyeghị otú m si gbanwee carb ahụ. Ọ na-agbakarị mma ka m na-atụgharị mgbanwe na-adabere na nri kama ọ na-apụta tupu ya agbaa ọsọ.
Echere m na m nwere ike ịwụpụ ihe ndị ahụ carb n'ihi na site na ihe m nwere ike ịhụ site na ikuku na-agbatị, ọ dị ọhụrụ. Otú ọ dị, Echere m na m ga-eme ngwa ngwa ngwa ngwa echi.
Daalụ maka enyemaka niile ọ na-enye m nsogbu, ma na-atọ ụtọ / agụmakwụkwọ.
osụk site jakeboat Na Sun, 08 / 06 / 2017 - 18: 16
Na zaghachi Chaị, nke bụ ibu bara uru. ... by jakeboat
Dị nnọọ nọrọ ikpeazụ ụbọchị abụọ ...
Naanị ụbọchị abụọ gara aga na ọdọ mmiri ahụ. Ebe a dị egwu ma kwe ka m dozie obere ụgbọala elu. Ọ na-ewepụta ngwa ngwa kama ọ dị ugbu a. Daalụ ọtụtụ nde mmadụ maka enyemaka niile. Nwa m nwoke na-ebugharị ya taa, na-amụmụ ọnụ ọchị.
osụk site ttravis na Solomon, 08 / 07 / 2017 - 01: 18
Na zaghachi Dị nnọọ nọrọ ikpeazụ ụbọchị abụọ ... by jakeboat
Ekwenyesiri m ike na ị nwere ekele dị ukwuu ugbu a na ị maara ụgbọala ahụ nke ọma. Echere m na ị ga-etinye nwa gị nwoke ka ọ nwee ike inweta ahụmahụ nke ga-adịgide ndụ. Ọ dị ịtụnanya na ọtụtụ ndị na-edozi ndị 3.5 HP motors. M na-ele ụfọdụ ọnụ ọgụgụ maka saịtị a. Naanị ndị 234 taa na-eleta saịtị ahụ ma jiri oge na-agụ banyere oru 3.5. Ndị ọbịa a si gburugburu ụwa na n'ọtụtụ asụsụ dị iche iche. Nke a anaghị agụnye moto ndị ọzọ. 3.5 bụ ọrụ anyị kachasị ewu ewu. Nwee moto gị ma mee ka ọ dịruo ma ọ dịkarịa ala afọ 50 ọzọ. Ọ bụrụ na ịnweta ohere, biputere foto ụfọdụ ebe a. Foto ndị dị na nke gị bụ ụgwọ ọrụ kachasị mma. Tom
osụk site Ram Jet Na Sun, 02 / 11 / 2018 - 23: 24
Ị nweghị oge gị ...
Ị gaghị enwe oge engine gị. Emere ya maka gị mgbe arụpụtara gị. Naanị jide n'aka na etinyere ihe e dere na cam eccentric na crankshaft na igosi isi ihe dị mma. Ọ bụrụ na ị nwetara akụkụ ọ bụla ọhụrụ, akpụkpọ anụ, condensers na isi dị na ịwụnye ha ma wepụ isi ihe ma dochie ọkpụkpọ ahụ.
osụk site jakeboat on Nọdụ, 08 / 26 / 2017 - 07: 33
Ejiri m 3hp Evinrude n'oge okpomọkụ a, nke pụtara, ihe mgbochi ọhụụ, carb kit wdg.... Anyị wepụtara ya azụ ihe dị ka ugboro iri na abụọ, ọ dịkwa mma. Ọ ka ga-agbapụta, dịka ọ dị ntakịrị na mmanụ ụgbọala, n'etiti etiti, mana obere ọsọ na oghe oghe na-agba ọsọ. Ugbu a, ezutewo m nsogbu ọhụrụ. Anyị na-ebugharị ya site na mwepụ ụgbọ mmiri na mgbe ihe gbasara 15 nkeji nke na-agba ọsọ ọ ga-amalite ịmalite ma ọ bụ ịkụgharị ihe dị njọ. Ọ bụrụ na m na-abaghị uru ya ala ọ ga-enweta anyị azụ na igba egbe, ma ngwa ngwa = njọ na-agba ọsọ. Amalitere m ịtụgharị uche na ngbanwe ahụ, ụgbọala a nwere otu, na enweghị m ike ịnweta ọnọdụ ahụ iji pụọ. Ihe edere bụ eziokwu na achọpụtara m naanị agịga edozi na-edozi kpamkpam, ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla, ụgbọala ahụ agaghị anwụ. Enwere m ike na engines ma ekwesighi ka egbutu gas ma gbuo moto ahu? Ọhụụ ọhụrụ, gas, ikpuchi ọkụ, akụkụ ndị na-arụ ọrụ ọkụ, ihe nkedo ọkụ ọkụ, wiwi, isi ihe, wdg. Mgbe m dochiri oghere ha nwere obere ojii, flakey, egbe na ha ma ahụrụ m njọ. Ọ na-ese anwụrụ ọkụ na-acha anụnụ anụnụ / na-acha anụnụ anụnụ mgbe mbụ ịmalite ya, ma ọ dịghị ihe dị ọkụ Mụ na nwa m achọpụtala oghere crappie n'akụkụ nke ọzọ nke ọdọ mmiri ahụ, ọ dịkwa ịtụnanya ịhụ mmeghachi omume ya mgbe ọ na-agba ha ọsọ ọsọ dị ka ikpuru si eme mmiri ahụ. Otú ọ dị, achọghị m ịnweta 20 nkeji oge mwepụta ahụ. Osimiri ahụ dị banyere 500 acres, ọ ga - ewere 3hp banyere 15-20 nkeji iji kpuchie ọtụtụ mmiri ahụ? Nke a bụ ụgbọ mmiri mbụ anyị na ejighị m n'aka, amaara m na 3hp dị obere ma buru ibu maka trolling.
Nwee obi ebere banyere rambling naanị na-enwe olileanya na onye ọ bụla hụrụ ihe dị mkpa.
osụk site ttravis on Nọdụ, 08 / 26 / 2017 - 10: 54
Na zaghachi Ngbacha by jakeboat
Ọ bụ nnọọ ekwe omume na ọ bụghị ...
O kwere omume na ọ bụghị ihe omimi na ọ ga-adị gị mkpa iwepụ carb ahụ ma kpochapụ ya. Nsogbu nke igwe ochie nke a na-eme ka ọ dịghachi ndụ bụ obere obere ihe dị na tank gas, na nnyefe mmanụ ụgbọala na-eme ka ịwapụ ma kpochapụ ụzọ ụzọ carburetor. A ga-atụ anya nke a. Ọ bụ ezie na ị gbalịsiri ike ihicha ihe niile, ọ dịghị ihe dị ka mmanụ ọkụ na-agbanye mmanụ iji wepụ ihe n'oge oge. M ga-ehichapu carburetor ugboro abụọ ma ọ bụ ugboro atọ tupu echere m na e megharila moto ahụ. Nke a dị mma ma dị mma. Ọ bụrụ na ị na-asụgharị na elu, n'etiti, ma ọ bụ dị ala, nke a nwere ike ịpụta na a na-akwagharị ụzọ ụzọ na carb. Ọzọkwa, agịga mgbanwe, ozugbo ị gbanwere ya, hapụ ya. A naghị eji ya maka ịkwụsị moto. Ịkwụsị ụgbọala ahụ site na ịkwagharị ihe nkedo nkwụsị na njedebe nke na-emechi valve ngwurukpu na carb. Ọ gaghị adị mkpa ị ga-achọ kaadị ọhụrụ carb iji hichaa carb otu ugboro abụọ ma ọ bụ atọ n'oge ahụ.
osụk site buru ibu on Fraị, 10 / 20 / 2017 - 09: 12
Ntucha mmanụ N'ime tank
Gbanwee ihe ọkpụkpụ na nkedo mmanụ, wughachi ọkpụkpọ azụ, carburetor, na ikpuchi ma kpochaa tank ahụ site na ntanye mpempe akwụkwọ, na 1966 JW21, ọ na-agbakwa nnukwu tank nke gas. Ozo ma o bu oge ato ka o na-arughari, o ga-agbapu ma nwua. Mgbe ọ na-anọdụ ala nkeji ole na ole, ọ ga-amalite na-agba ọsọ ruo oge dị mkpirikpi, mgbe ahụ gụchaa ma nwụọ. Oghaghachiri n'uko ebe a na-eme ka kpoo ahụ na-agba ọsọ, nke kpatara ọtụtụ anwụrụ ọkụ. Ụda maara?
A na-ewepụta ntanetị mmanụ bụ otu ígwè ígwè a na-agbazi ígwè nke na-ebugharị n'elu n'ime tank ahụ. Mgbe tank ahụ jupụtara, nnu nke nza ka e si emikpu ka o kwe ka mmanụ zuru ezu, ma dị ka ọkwa mmanụ si ada, mmanụ ụgbọala adịghị ezu. Enweghị m ike ịnweta nchara mmanụ iji kpochapụ ya. Enwere ike ịchacha ebe site na jupụta tank ma ọ bụ weghachite ya na ụfọdụ ihe ọjọọ dị egwu, ma ọ bụ wepu ya site n'itinye okpomọkụ na / ma ọ bụ Kroil, ma enwekwaghị ndidi ma kpochapụ ya ma debe ntanye ntinye n'etiti ọdụ tank na carb . Ugbu a, JW na-egwu egwu! Enwere m ike ịnweta Grumman Sport Mbanye ụgbọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ. Na-agba ọsọ karịa oge ọ bụla.
ANYỊ M GA-ECHERE R & R NKE MGBE EKWU ỤLỌ ỤLỌ MGBE A GA-AHỤ N'ỌZỌ A GA-EZI ỤWA YOHNNYRUDES.
osụk site Ram Jet Na Sun, 02 / 11 / 2018 - 23: 39
Na zaghachi Ntucha mmanụ N'ime tank by buru ibu
Nanị m zụtara Johnson 3HP ...
Nanị m zụtara Johnson 3HP na nchara mmanụ ọkụ a na-emechasịghị ọcha. M gbalịrị lacquer thinner na ọbụna Muriatic acid. Mmanu na-agba ọsọ maka 1 / 2 mbụ nke tank. Enwere m nyocha ma wepụ ihe ndị e ji ọla kọpa mee nke ọla kọpa. Ana m echere VW gas tank filter site na eBay iji dochie ihe mkpuchi ọla na ihe kwesịrị ekwesị maka Johnson. Ị nwere ike ịzụta ihe ọkpụkpọ OEM maka ihe dịka $ 40.00 mana agaghị m akwụ ụgwọ ahụ. Emechara m kpoo gas tank site na itinye ihe gbasara 750 BBs na ihe dị ka elekere asatọ. Azụrụ m ihe mgbochi rọba n'ime ụlọ ahịa na-ekpofu ihe iji kwụnye oghere ọkụ ọkụ na mmanụ ụgbọala. Eji m okpukpu abụọ kpoo ọkụ ndị ahụ na-enye ndụ ma kpochaa ya na Formula 409 na mmiri. Tank dị ọcha.
osụk site ttravis Na Sun, 11 / 05 / 2017 - 12: 52
LighTwin 3 HP Tanch Filter
Glat to hear you got it working with your retrofit. M mere ụfọdụ nyocha. Nọmba nọmba Evinrude maka nza ahụ bụ 0594034. Enweghị m ike ịchọta ya na Amazon, ma achọpụtara m ụfọdụ edepụtara na eBay.
Mgbe ihe ọ bụla dara, gbalịa eBay. Ana m azụta ọtụtụ akụkụ n'ebe ahụ ma chebe ịdebanye aha dị ka onye mmekọ eBay, dị ka m na amazon.com.
Nwee obere obere moto gị.
osụk site Raoul na Solomon, 01 / 15 / 2018 - 03: 17
ejide n'aka ma ọ bụrụ na nke a bụ ...
ejide n'aka ma ọ bụ na ebe a bụ ebe ziri ezi
mana enwere m XINUMX evinrude lightwin nke ndị òtù m na-agụ
ọ na-ama mma ma ọ na-agba mbọ na m weere isi ma chọpụta na mkparịta ụka dị njọ n'ezie ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa iji dochie piston yiri mgbaaka na pistons ma gbanwee mgbidi cylinder ahụ
ọ dị ka ihe nkedo ọkpụkpụ na-eyi oke nká
O nwere ike ịbụ na ihe a nile nwere ike ime ka ọ ghara ịdị jụụ, ya mere ọ ga-abụrịrị na ọ dị mkpa ka a wughachi ya
Achọrọ m ịme ihe zuru ezu iji chọkwuo mmebi ọ bụla ma ajụjụ m bụ ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ahụmịhe ọkpụkpụ ọrụ a maọbụ mara ma ọ bara uru ka ọ rụọ mmezigharị zuru ezu
na ebe ịchọta ebe m lere anya na intaneti maka pistons na-atụgharị ma ghara ịchọta ha enyemaka ọ bụla ga-abriciated
osụk site ttravis na Solomon, 01 / 22 / 2018 - 14: 38
Na zaghachi ejide n'aka ma ọ bụrụ na nke a bụ ... by Raoul
Kedu ihe mkpali ...
Kedu ihe mkpali na-agụ na nyocha gị? Kwesịrị ịbụ 70-80 psi.
Akụkụ siri ike ịchọta. Ị nwere ike ịka mma ịchọ ebe akụkụ moto na e-bọta. Mgbe ụfọdụ, ha nwere ego maka obere ego karịa ka ị ga-etinye na akụkụ.
osụk site Raoul na Solomon, 02 / 12 / 2018 - 03: 57
Na zaghachi Kedu ihe mkpali ... by ttravis
m na-enweghị mkpakọ ...
Enweghị m ọkachamara mkparịta ụka mana m wepụrụ efere na-ekpochapu ọkụ ma gbanwee ọkpụkpụ ahụ ma nwee ike ịnụ ụda si na pistons mgbe ha na-aga maka mkpakọ ma ọ dịkarịa ala otu n'ime pistons ahụ na-ele anya nke ọma
ugbua ka ị na-ekpuchi oghere ahụ ka ịchọta anya zuru ezu n'akụkụ ndị ahụ ma nwee ike ịgbanye bọlbụ na-eme ka ndị na-ebugharị ya ma ọ bụrụ na ọ dị ha mkpa
ma enwere m ike ịchọta pistons ọ bụla ọ bụghị ọhụụ, ọ bụghị nke aka abụọ ị nwere ike ịzụta naanị ya.
osụk site Raoul na Solomon, 02 / 12 / 2018 - 15: 22
Na zaghachi m na-enweghị mkpakọ ... by Raoul
okey m weere ...
okey m weere ihe nkedo engine niile ma ndị na-ahụ maka mmiri nwere ụfọdụ ihe na-enye ìhè na njedebe nke ala ma ugbu a, m ga-achọpụta ma ọ bụrụ na enwere m ike ihichapụ ma ọ bụ ka m wepụ oghere ahụ
a na-atụba pistons abụọ ahụ na hel
achọkwara m obere akụkụ dịka gasket na ihe dị otú ahụ na ụfọdụ akụkụ mmiri ma ọ dị mma ka m chere na ọ ga -
ya mere ugbu a o yiri ka achọrọ m 2 ọhụrụ pistons ma gbanye akwa gasket setịpụrụ na mmiri mgbapụta na-agbawa ụlọ (m agbaji otu oghere oghere n'ihi ajọ njọ corosion)
ma ugbu a, m na-ejidesi ihe ahụ na-enweghị mbempe na ngọngọ ahụ ọ dị ka ụdị ụdị a na-atụba na ngọngọ ahụ ọ naghị eyi ka ọ na-eyi nká
ọ bụla ọzọ na-enye ndụmọdụ na njikọ dị na pistons ọhụrụ
osụk site ricklummer on Fraị, 02 / 16 / 2018 - 07: 01
Pistons yiri mgbaaka
1963 Evinrude 3hp 3303s marine engine.com oversize rings pistons na ndị ọzọ
osụk site Raoul na òtù ezinụlọ, 02 / 21 / 2018 - 10: 24
Na zaghachi Pistons yiri mgbaaka by ricklummer
m allready anya na na ...
Ana m elele ebe ahụ anya
akwa mgbaaka ka na-adị, ma pistons ma nke mbụ ma dị elu anaghị eme ọzọ
tinyere na m weere ngọngọ ahụ gaa ụlọ ahịa ma ọ dị ka ha ga-echegbu onwe ha
Ugbu a, echere m ihe ọ ga - efu iji chepụta pistons ọhụrụ ma mee ka mgbochi ahụ mee ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe karịrị 200 ọrịa na - ewepụta ihe ahụ na - eme ya ma mezue ihe mere na m masịrị engine a ma na - ewere ihe ize ndụ n'ịzụta ihe abụọ na - pistons nwere ike ime ka ọ dịkwuo oké ọnụ ma ọ bụrụ na ha emee ihe ọjọọ
ọ bụrụ na onye ọ bụla maara ebe nwere ike ịmepụta pistons nke ga-enye aka na niile ejirila kọntaktị na ebe ole na ole ma ha asị na m ga-akpọtụrụ onye na-ere ahịa ma naanị onye na-ere ahịa evinrude na mba m enweghị ihe ọ bụla maka moto m
osụk site Raoul on Fraị, 02 / 23 / 2018 - 02: 59
Na zaghachi m allready anya na na ... by Raoul
Emere m ụfọdụ ndị ọzọ egwu ala na ...
Enwere m ụfọdụ ọzọ egwu ala ma chọpụta ngọngọ na ntụgharị ọ bụla dị na ya na ọnọdụ dị mma ụlọ ahịa ahụ nwere ya ọbụna na-enye m mkparịta ụka mkparịta ụka ọhụrụ ma kwuo na ọ bụ ezigbo engine na ha kwuru na ọ na-agba ọsọ tupu a kwasaa ya.
onye na-emepụta piston laghachiri na atụmatụ ọnụahịa nke 250 naanị maka pistons maka ochie ochie m nwere ugbu a nakwa n'akụkụ niile ọ na-etinye nchịkọta na 350 nke bụ ihe engine a bara uru ma ọ bụrụ na m ga-ere ya
ya mere na njedebe ya bummer nke m na-eji mpempe akwụkwọ mbụ ma ọ dịkarịa ala, enwere m ọnụ ala dị ala iji jiri ụgbọ mmiri m n'oge okpomọkụ
osụk site boatman350 na Solomon, 09 / 10 / 2018 - 13: 45
57 evinrude lightwinn nwere ihe ndị ọzọ ma ọ bụghị n'ihu
osụk site ttravis na Solomon, 09 / 10 / 2018 - 14: 18
Na zaghachi lightwinn by boatman350
Ee, Ị na-enyocha ihe niile ...
Ee e, Ị na-atụgharị ya dum ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịbanye. A na-akpọ ha "ndị na-egwu ụgbọ mmiri" n'ihi na enweghị nnọpụiche ma ọ bụ weghachite. N'iji ya mee ihe, nke a abụghị nsogbu.
osụk site boatman350 na Solomon, 09 / 10 / 2018 - 17: 41
Na zaghachi Ee, Ị na-enyocha ihe niile ... by ttravis
ekele m ttravis ezigbo jụụ ...
ekele m ttravis ezigbo jụụ m nọ na-ama ihe mere moto nwere ike iji rụọ 360 dum
osụk site boatman350 on Tọs, 06 / 06 / 2019 - 07: 30
ọ dịghị ọ dị na-aga n'ihu na ...
ọ dịghị na ọ ga-aga n'ihu na ị gbanwee 180 engine iji laghachi azụ a na-akpọ buster buster e gwara m
osụk site boatman350 na Solomon, 09 / 10 / 2018 - 13: 53
ebee ka mmiri si pụta na 3hp evinerude m ahụla ọpụpụ ọhụrụ na mmiri siri ike n'akụkụ ma ọ dịghị ihe dị n'ime m enwere akụkụ na azụ nke osisi ahụ na obere mmiri ọ kwesịrị ịdị ka nke ahụ maọbụ enwere ebe di ebe iyi miri siri ike bia
osụk site ttravis na Solomon, 09 / 10 / 2018 - 14: 16
Na zaghachi kpalie by boatman350
Enwere di na nwunye obere ...
E nwere umu obere obere di na nwunye nke na-eme ka mmiri na ikpochapu na ala. E nweghị mmiri buru ibu nke na-apụta. My dị ka otu ego dịka onye na-eme kọfị na-eme kọfị.
osụk site boatman350 na Solomon, 09 / 10 / 2018 - 17: 38
Na zaghachi Enwere di na nwunye obere ... by ttravis
(Ọ dịghị isiokwu)
bụ oghere oghere ahụ na stud nke dị n'etiti ebe mmiri kwesiri ka ọ pụta
osụk site ttravis na Solomon, 09 / 10 / 2018 - 20: 40
Enwere m otu nsogbu ahụ na ...
Enwere m otu nsogbu ahụ na ngwaọrụ m 3 HP. Achọghị m ịma ebe niile.
osụk site boatman350 na Solomon, 09 / 10 / 2018 - 22: 15
Na zaghachi Enwere m otu nsogbu ahụ na ... by ttravis
alright do i have to remove ...
O doro m anya na m ga-ewepụ ụgbọala ahụ ma ọ bụ ebe mmiri kwesiri ka ọ pụta ma ọ bụ naanị wepụ isi
osụk site ulo dloft on Tọs, 08 / 01 / 2019 - 14: 38
Ole mmiri na-ahapụ sistemụ?
Agụrụ m n'ụra a na mmiri mmiri na-ebupụ Oke Enyemaka kwesịrị ịbụ otu ihe na -eme kọfị nke na -efe mmiri. M ga-ekwu nke m banyere nke ahụ. Ma, enwere m ụjọ maka ya, isi ga-adị ọkụ mgbe ntakịrị oge gachara ule a na-achọghị ka m jide aka m na ya. Echiche?
PS - Nke a bụ post mbụ m na saịtị a na-enyere aka. Daalụ onye ọ bụla.
osụk site ttravis on Fraị, 08 / 02 / 2019 - 13: 57
Na zaghachi Ole mmiri na-ahapụ sistemụ? by ulo dloft
Achọrọ m nọmba ihe nlereanya ka m…
Achọrọ m nọmba ụdị ka m nwee ike ịza ajụjụ gị nke ọma. Mofọdụ ndị na-anya mmiri nwere igwe ọkụ nwere ike dochie anya; ụfọdụ anaghị eme ya.
osụk site ulo dloft on Tus, 08 / 06 / 2019 - 16: 31
Na zaghachi Achọrọ m nọmba ihe nlereanya ka m… by ttravis
Ego ole bụ mmiri
Ihe nlereanya bụ JW-15
osụk site ttravis on Tọs, 08 / 08 / 2019 - 01: 40
Enweghị thermostat na…
Enweghị thermostat na moto ahụ. Odi mmiri ahụ ziri ezi. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ijide aka gị na ọkpọ ọkpọ, mgbe ahụ ị ga - enwe ụfọdụ mgbochi. Might nwere ike ịtụle iwepu isi cylinder ahụ ka ọ wee mara ma ọ dị ọcha. Mgbe ị dochiri ya, hụ na ị na-eji gasketị ọhụrụ .... Tom
osụk site boatman350 on Tus, 09 / 11 / 2018 - 08: 07
Enwere m ike iji rtv gasket maker ...
Enwere m ike iji rtv gasket maker maka ikpu isi isi nwa oge na ebe a na-agbanye ụkwụ maka moto ahụ na mpaghara ala
osụk site ttravis on Tus, 09 / 11 / 2018 - 11: 13
Na zaghachi Enwere m ike iji rtv gasket maker ... by boatman350
M ga-akwado ịnweta ...
M ga-akwado ịnweta gasket isi kwesịrị ekwesị. RTV nwere ike ọ gaghị adị ike iji guzogide nrụgide na okpomọkụ, gbakwunyere na ọ nwere ike ịbanye n'ime mmiri mmiri ma mee ka nsogbu dịrị. Amaghị m ebe ị nọ, ma maka m, isi nkuku isi adịghị ọnụ. Amaara m na ụfọdụ ndị nọ n'ụwa na-esiri ike inweta akụkụ ma mee ka ha nwekwuo ihe.
osụk site boatman350 on Tus, 09 / 11 / 2018 - 13: 12
banyere ihichapu oke mmiri
osụk site ttravis on Tus, 09 / 11 / 2018 - 13: 26
Enwere m ikeheadhead ma ...
Enwere m ike isi ma chọpụta ụzọ zuru oke nke mmiri site na ntinye nke na-agagharị agagharị na ebe ọ na-ekpochapụ na njedebe na mpaghara ala. Enwere m uzu ikuku na ọtụtụ wired ọma na ihe ndị a na-egwuru egwu ka ihe niile kpochapụrụ. Echere m na edere m banyere nke a ma ọ bụ ọrụ 3.0 ma ọ bụ 5.5 m. Ụfọdụ n'ime ya bụ ndị kpuru ìsì, n'ihi ya, eji m ikuku ikuku na-efesa ikuku ma hụ ebe ọ na-apụta. O were oge. Ọtụtụ n'ime ụzọ ndị ahụ dị ntakịrị ma dị mfe, na-egbu ọtụtụ motọ.
osụk site boatman350 on Tus, 09 / 11 / 2018 - 21: 35
hey new problem lol ...
ohuru ohuru ohuru lol wepu isi ma kpochapu akwukwo ndi ozo di iche iche ma mgbe ha weghachisiri isi (n'iji nkuku mbu) ma ugbua ugboaala agaghi amalite ugbu a ma dee ya na ndu ruo oge ole na ole mgbe o tinyechara kpochapu n'ime ulo mkpocha ma mgbe nke a gasiri .... gini ka unu chere
osụk site ttravis on Tus, 09 / 11 / 2018 - 21: 57
Na zaghachi hey new problem lol ... by boatman350
Aịlị na-esi n'elu kwụsị? Ị ...
Aịlị na-esi n'elu kwụsị? Eleghị anya ị nwere ike isi n'elu ala nke na-egbochi agịga gara aga ọ bụ ọnọdụ nkịtị.
osụk site ejfellman on Nọdụ, 09 / 15 / 2018 - 17: 39
Na nhazi ntụziaka gị ...
Na ntụziaka gị maka 3hp Lightwin (nke dị ukwuu, btw) bụ ihe ị na - akpọ XINUMX cylinder n'elu ma ọ bụ obere cylinder?
osụk site ttravis Na Sun, 09 / 16 / 2018 - 19: 43
Ntuchi 1 bụ elu ...
1 Cylinder bụ upper cylinder.
osụk site Ụkwụ on Tus, 09 / 25 / 2018 - 16: 03
Ana m echere oge JohnsonNNXX Johnson; carb, ịmịnye ọkụ, ịkwanye, ọrụ. Ọ dị mma ma ọ bụrụ na ọ na-asọ mmiri ozugbo, ruo n'ókè ebe gas si na njikọ ụgbọ ala carburetor / ikuku. Mgbe m wughachiri carb ahụ, enwere m ntakịrị mmiri nke na-ejide ihe owuwu mmiri ahụ. Ebe ọ bụ na ụfọdụ n'ime ndị ọrụ ugbo a adịghị enwe isi mmiri, m na-etinye ya na-enweghị ya. Mmiri kpuchiri ya. Ya mere, m weere efere mmiri ma wụnye mmiri nke m chọtara n'etiti akụkụ ochie m (enwere m 50 hp Evinrude / Johnson). Ọ ka bụ idei mmiri.
Akwụpụrụ m ka ọ na-agba ọsọ 1 & 1 / 2 na-agba ọsọ ọsọ na bọtịnụ 3 / 4 dị ala.
Ibe akwukwo a 1
Next page Osote >
Ibe ikpeazụ Ikpeazụ »